Mibvunzo - FAQ - Hebei Yakanakisa Fekitori
tine fekitori yedu pachedu. Kana iwe uine mukana, unogamuchirwa kushanyira fekitori yedu.
Iwe unopa masevhisi akagadziriswa?
Isu tinopa zvakagadziriswa masevhisi Ndapota taura nesu uye ngatikurukurei zvakagadzirwa zvaunoda.we tichakupa zano rehunyanzvi
Ndingave kwenguva yakareba sei ndinogona kutora zvinhu zvangu mushure mekuisa odha?
Zvinotora nguva yakareba kuti ugadzire chigadzirwa.Kana iwe uchida kugadzira yevhu modhi.Zvinotora mazuva anenge 20-25 kugadzira iyo modhi.Zvinotora mazuva 25-30 kugadzira marble kana kukanda zvigadzirwa zvemhangura.
Ini ndaigona kuona iyo yekugadzira nzira?
Ehezve, Isu tinotumira mifananidzo yekugadzira kufambira mberi vhiki rega rega kuti iwe utarise Mushure mekugadzirwa kwapera, ini ndichatora mifananidzo yechigadzirwa nemavhidhiyo kune yako yekupedzisira yekusimbisa.Kana pasina dambudziko, isu tinorirongedza.
Chokufambisa chako chakachengeteka here?
Tine nyanzvi dzekupakata Kana pasuru yapera, muongorori wemhando anozotarisa mhando yepakeji Iva nechokwadi chekuti zvinhu zvakarongedzwa nenzira yakachengetedzeka usati waendesa.
Chii chandinofanira kuita kana ndikawana zvinhu zvaputswa mushure mekunge ndazviwana?
Zvinoenderana nehuremu hwezvinhu, mutengesi wedu anozotaurirana newe. Kubhadhara kune imwe mari kana kugadzira zvigadzirwa zvitsva.
Maitiro ekuisa chivezwa?
Mushure mekunge zvigadzirwa zvapera, isu tichavaisa ivo mufekitori kamwe.Ndinogona kutora mifananidzo yeichi chiitiko iwe. Kana kugadzira mifananidzo yekumisikidza iwe. Kana icho chigadzirwa chiri chakaomarara.Tinogona zvakare kuenda kunyika yako kunotungamira kuisirwa.
Ungatanga sei kushandira pamwe?
Tichatanga kusimbisa dhizaini, saizi uye zvigadzirwa, tobva tadzikisa mutengo, ipapo chibvumirano, tobva tabhadhara dhipoziti. Tichatanga kuveza zvigadzirwa.
Kero: Rm No.15a10-15a11, Zhongyuan Kuvaka, No.368 Youyi North Street, Shijiazhuang, Hebei, China